थप्पड हानेर ब्युँझाउने अनौठो अलार्म | Sagarmatha TV
थप्पड हानेर ब्युँझाउने अनौठो अलार्म
बिहान सबेरै उठ्नका लागि प्रयोग गर्ने अलार्म कस्तो छ? अलार्म बज्दा अझै मज्जा मानेर सुत्ने गर्नु त भएको छैन? कि अनिवार्य उठाउने आलर्म होस भन्ने चाहनु हुन्छ? यस्तै एक आलर्मको प्रयोग सम्बन्धि भिडियो तपाईलाई देखाउँदैछौ । यो भिडियोमा एउटा यस्तो अलार्म देखिन्छ जसले निदाइरहेकी एकजना महिलालाई थप्पड हानेर ब्युँझाएको छ । सुन्दा अचम्म लाग्ने यो वास्तविक हो ।
सिमोन गिर्ट नामक यु ट्युब प्रयोगकर्ताले यो थप्पड हान्ने अलार्मको भिडियो यु ट्युबमा अपलोड गरेकी हुन् । उनैले २०१५ मा यो अनौठो अलामको निर्माण पनि गरेका हुन् । यो अलार्ममा मोटर, घडी तथा एउटा नक्कली हातको प्रयोग गरिएको छ । यसलाई उनले वेकअप मेसिनको नाम दिएकी छन् ।
भिडियोमा उनी यो अलार्म प्रयोगको विधिबारे पनि बताउँछिन् । उनले भित्तोमा यो अलार्म सेट गर्छिन् र घडीमा टाइमर लगाएर सुतिरहेकी हुन्छिन् । जब घडीमा अलार्मको समय बज्दछ तब अलार्मले उनको अनुहारमा जोडतोडका साथ थप्पड हान्न सुरु गर्दछ ।साथै त्यो नक्कली हातले उनको कपाल भुत्ल्याउन पनि थाल्दछ । आफ्नो कपाल सम्हाल्न पनि उनलाई हम्मेहम्मे हुन्छ ।
साँच्ची समयमा उठ्न त चाहने तर सक्दै नसक्ने अल्छी मानिसहरु जसले घडीको अलार्म बज्दा समेत उठेर बन्द गर्ने र फेरि सुत्ने गर्दछन् उनीहरुका लागि यो थप्पड हान्ने अलार्म निकै सहयोगी हुने पक्का छ ।